SLT SPORTS: Shirarkii Jaraa’id Ee Qaar Ka Mid Tababarayaasha Kooxaha Qaarada Yurub Iyo Qodobo Kale | Somaliland Today
← CAJIIB: Dilkii Loo Gaystay Labo Wiil Oo Madaw Ah Waxaa Loola Dan Lahaa Obama
Daawo: Xukuumadda Somaliland Oo Si Caalamiya Adduunka Ugu Soo Bandhigtay Shidaalka Ku Duugan Iyo Cida Xaqa U Leh Soo Saaristiisa. →
SLT SPORTS: Shirarkii Jaraa’id Ee Qaar Ka Mid Tababarayaasha Kooxaha Qaarada Yurub Iyo Qodobo Kale
(SLT-Barcelona)-Shirka Jaraa’id Ee Luis Enrique Ee Ka Horeeya kulanka Eibar Oo Faah Faahsan.
Tababaraha Kooxda Barcelona ee Luis Enrique ayaa shirkiisa jaraa’id ee ka horeeya kulanka kooxdiisa Barcelona iyo Eibar kudhex maridoona Camp Nou kaga hadlay arimo badan oo la xidhiidha kooxdiisa.Barcelona ayay iskugu xigi doonaan kulamo muhiim ahi kuwaas oo kala ah Ajax iyo Real Mardrid oo ka danbayn doona kulankan Eibar.
Enrique ayaa ka hadlay rekoodhak gool dhalinta ee uu Messi qarka u saaran yahay waxakale oo uu ka hadlay abaalmarinta kabta dahabka ah ee Luis Suarez la gudoonsiiyay waxaana la waydiiyay inay arimahani qaseen tababarkii kooxdiisa wuxuuna ku jawaabay: “Waxaanu tababarka qaadanay laba maalmood, taas oo ah wax badan marka aanu labadii maalmoodba aanu kulan ciyaarayno”.
Enrique ayaa la su’aalay inay dhibato ku tahay marka uu dooranayo werarkiisa wuxuuna ku jawaabay: “waa dhibaato layaableh,waana dhibaato uu tababare kastaa la kulmo, tartankuna anaga ayuu noofiican yahay”.
Enrique ayaa sidoo kale ka hadlay isku dhicii Police ka iyo Pique wuxuuna yidhi: “waxaa jira waxyaabo ciyaartoyda ku dhaca marka ay ku jiraan noloshooda gaarka ah aniguna taas ma rogrogo. Wuxuu sheegay inuu ka xun yahay wixii dhacay taas ayaana igu filan”.
Intaa kadib ayuu Luis Enrique ka hadlay kulanka Eibar iyo kooxdiisa Barcelona wuuxuna yidhi: “waa koox fiican oo natiijooyin fiican ka heshay marka ay martida ku tahay garoomada kale, waxaan rajaynayaa inaan la ciyaari doono koox weerar deg deg ah soo qaadi doonta isla markaana difaaca ku jiri doonta. Waxay haystaa saddex ciyaartoyd oo naga tirsanaan jiray. Camp Nou qaybtiisa ayuu ka qaadan doonaa laakiin waxaan eegidoonaa sida ay weerarka u soo qaadaan”.
Enrique ayaa ka hadlay taam ahaanshaha Suarez wuxuuna yihdi: “Way adag tahay inaan sidaa idhaahdaa, wuxuu dareemayaa inuu horumar wayn sameeyay marka la barar dhigo tababarkii hore iyo markii uu ciyaaray kulankii wadankiisa kaas oo caawiyay.Ma ogi inuu 100%,80% ama 90% uu taam yahay, laakiin bilihi ugu danbaysay qaab kiisu wuu fiicnaa”.
Ugu danabayn Enrique ayaa sidoo kale la waydiiyay in Munir iyo Sandro ay ku laaban doonaan Barca B marka uu Luis Suarez ku soo laabta koobda Kowaad ee Barcelona wuuxuna yidhi: “wali go’aan ka maanu ka gaadhin, waanu baadhaynaa , arimuhuna way is badali karaan, way nala tababaran doonaan waxayna u ciyaari doonaan kooxda labaad, nasiib ayaanu leenahay waxayna arintu ku xidhnaan doontaa wax qabadkooda. Aad ayay u fiican tahay inaan iyaga xoojinaa”.
Ancelototti oo Xaqiijiyay In Karim Benzema iyo Raphael Varane Seegidoonaan Kulanka Levante.
Tababaraha Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa cadeeyay in Karim Benzema iyo Raphael Varane ay seegidoonaan kulan ay Real Madrid la ciyaari doonto kooxda Levante.
Ancelotti ayaa shaaca ka qaaday inay labadan ciyaartoy markii ay ka soo laabteen waajibaadka xulka qarankooda France ay la soo laabteen xumad, sidaa daraadeedna ay seegidoonaan kulanka Levante.
Ancelotti ayaa yidhi: “Ciyaartoydu nabadgalyo ayay ku soo laabteen laakiin saaka ayaanu aragnay Benzema iyo Varane oo xumadaysan, waxayna seegi doonaan kulanka Levante” Ancelotti ayaa sidan u sheegay AS.
“Kooxda inteeda kale way fiican tahay waxaananu sii wadi karnaa qaab ciyaareedka yaga fiican”. Iyadoo uu Sergio Ramos dhaawac ku maqan yahay ayuu Ancelotti sheegay inuu Nacho difaaca la wadaagi doono Pepe.
Mar haddii uu maqan yahay Benzema, ayaa la rajaynayay inuu Ronaldo buuxin doono booska weerarka hore balse Ancelotti ayaa sheegay inuu haysto doorashooyin kale wuxuuna Ancelotti oo arintaa ka hadlayaa yidhi: “Booska Cristiano isbadali maayo, kaliya waxaan hore u sheegay inuu leeyahay tayada uu kaga ciyaari karo weerarka No.9 ka, aragtidaasi may ahayn in booskiisa la badalo, wuxuuna ka ciyaari doonaa baasha bidixda. Waxaan go’aansan doonaa inuu Javier Hernandez buuxiyo ama ciyaartoy kale”.
Shirkii Jaraa,id Ee Pellegrini Uu Qabtay Ka Hor Kulanka Tottenham Oo Kooban.
Kooxda Man City ayaa bari xili hore marti qaadi doonta kooxda Tottenham oo xiliciyaatreed kan ka mid ah kooxaha ugu adag horyaalka ingiriiska.
Tababare Manuel Pellerini ayaa qabtay shirkiisa jaraa,id ee ka hor kulankaas wuxuuna yidhi:
“Kulanku waa kulan adag, ma aha inaan ciyaar walba 6 gool ka dhalinayno Tottenham, xiliciyaareed kii hore Tottenham aad ayeey u liidatay, inaguna waxaan ciyaarnay mid ka mid ah kulamadeenii ugu fiicnaa”.
“Waxaan doonaynaa inaan ciyaarno kulan wayn, lakiin waxaa xaqiiq ah in wax walba aanay ahaan doonin sidii xiliciyaareed kii hore oo kale”.
Pellegrini ayaa la waydiiyay in Yaya Toure oo ciyaari karo kulanka Tottenham wuxuuna ku jawaabay:
“Yaya wuxuu na soo gaaray shalay lakiin taas kama hor istaagi doonto inuu ku soo bilowdo ciyaarta, waxaan go,aan ka gaari doona bari”.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay dhaawaca Mangala wuxuuna yidhi “Ma ciyaari doono kulanka Tottenham, lakiin diyaar ayuu noqon doona kulanka Champions League ee talaadada, dhamaan laacibiinteena kale waa diyaar”.
Van Gaal Oo Doonaya Man United Isku Dheeli Tiran.
Tababaraha Kooxda Man United ee Louis Van Gaal ayaa doonaya inay kooxdiisu horumar samayso isla markaana ay noqoto koox isku dheeli tiran, wuxuuna ku adkaystay inuusan doonayn uun koox weerar khaas ah ku dhisan.
Van Gaal ayaa xagaagii dhawaa la soo wareegay ciyaartoyda Di Maria iyo Falcao, iyadoo ay ku biireen Rooney iyo Van Persie oo kooxda sii joogay, laakiin Van Gaal ayaa aaminsan inay shaqo badani u taalo is ay kooxdiisu iskugu dheeli tirianto.
Van Gaal ayaa yidhi: “Waxaanu doonaynaa inay kooxdu isku dheeli tirnaato, waxaan kulankii Everton kadib sheegay inaan doonayo dheeli tirnaanta kooxda, madoonayo koox weerar uun ah”.
“Marka aad kubbada lumiso waa inaad si fiican u difaacan kartaa oo aad qaab yeelataa markaas ayaanad ciyaarta dili kartaa.Waan ku kalsoonahay ciyaartoydayda, waxaanan filayaa inay taasi muhiim tahay, laakiin waxaa ka muhiimsan inay ciyaartoydu ku kalsoonaato tababarahooda iyo shaqaalahooda”.
“Sidii aan hore usheegay sidii hore waanu ka fiicanahay laakiin wali kooxdu ma dheeli tirna, waan ka xumahay inaan sidaa idhaahdo laakiin runta ayaa sidaa ah. Waxaan rajaynayaa inanu horumar samayn doono”.
Khadar Xasan Dahabi